Indalo enyulu, kunye neengoma zeentaka. - I-Airbnb
Indalo enyulu, kunye neengoma zeentaka.
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOriana E Toni
UOriana E Toni yi-Superhost
Vuka ucule iintaka kwaye uvule iikhethini ukonwabele umbono omangalisayo!
Kwi-chalet yethu, kunye ne-rustic yangaphakathi egqitywe kwisitayile se-chalet yaseSwitzerland, undwendwe luya kuba nalo lonke uxolo olunikezwa ngaphakathi, lonke unxibelelwano kunye nendalo eluhlaza kunye necocekileyo ekufuneka umntu aphumle kwaye alibale malunga nemihla ngemihla. , unako kwakhona ukunandipha ngokupheleleyo kwiindawo kunye kwivenkilana ixesha lokuzonwabisa. I-cottage igcwele i-hobs, ilinen yokulala kunye nokupheka kunye nokutya izinto.
Ngemizuzu eyi-15 ukusuka eThermas Water Park, i-chalet ibekwe e-Águas de São Pedro, kwifama ebiyelwe ngokupheleleyo, ilungele abantwana okanye izilwanyana zasekhaya. Le ndawo ijikelezwe buhlaza bendalo, ifikeleleka kwindlela enesanti, ngokwenene emaphandleni.
I-Intanethi yi-high-speed fiber optics. Inomabonwakude ohlawulelwayo ovela kuClaro TV enamajelo ayo yonke incasa.
Kukho i-kiosk ene-barbecue ngexesha lokuzonwabisa kunye nabahlobo okanye usapho.
I-chalet yakhiwe kwi-container, igqitywe ngokufana nendawo yethu yaseSwitzerland. Kananjalo inamanzi ashushu ekhitshini, okuhlamba izitya ngokukhululeka ngeentsuku ezibandayo. Ngeentsuku ezishushu, i-Air-Conditioning ishiya imo engqongileyo intsha kwaye yonwabile.
Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo ukuze ulungiselele ukutya kwakho. Ngexesha elifanelekileyo, unokukhetha eyakho imango entsha kumthi ojongene nomnyango okanye isaladi yakho kunye nezinye iziqholo kwigadi yeziqhamo ngasemva kwendlwana.
Ekuseni, kuhlala kukho ukucula okumnandi kweentlobo ezahlukeneyo zeentaka eziphaphazela efama.
32" HDTV ene-intambo yepremiyamu
4.88 · Izimvo eziyi-96
KwiNdalo, kunye neefama ezimbalwa ezingabamelwane. Ubumelwane buhlala buzolile, kodwa kuyenzeka ukuva umculo okanye into efana nale ivela kwiifama ezikufutshane. Akukho nto ibaxiwe kakhulu, kodwa caca ke kungabikho ukungaqondi ukuba kuthe cwaka njengegumbi lasesibhedlele. :)
Umbuki zindwendwe ngu- Oriana E Toni
Somos um jovem casal, ele brasileiro e ela suíça, temos 2 crianças pequenas e vivemos em Basiléia, na Suíça.
Gostamos muito de viajar e ao longo dos anos deselvolvemos uma paixão por outras culturas e lugares no mundo. Construímos então com carinho nosso chalé na cidade natal do Toni, onde colocamos um toque suíço no interior, para que todos que lá se hospedem (incluindo nós quando vamos ao Brasil) se sintam confortáveis e experimentem um pouco da sensação de um chalezinho do estilo da terrinha onde vivemos.
Gostamos muito de viajar e ao longo dos anos deselvolvemos uma pai…
Kukho iifama eziselumelwaneni, kodwa indlwana yonke ibiyelwe, nayo yonke imfihlo yakho ukushiya izilwanyana zasekhaya simahla.
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español